.အာလူးကြော်ထုပ်တွေ လာရောင်းတဲ့သူကို ကြည့်လိုက်တော့ သရုပ်ဆောင် အံ့မင်းညို ဖြစ်နေတယ်ဗျာ – Askstyle
.အာလူးကြော်ထုပ်တွေ လာရောင်းတဲ့သူကို ကြည့်လိုက်တော့ သရုပ်ဆောင် အံ့မင်းညို ဖြစ်နေတယ်ဗျာ
မႈန္ရီဝါးေနတဲ့ နံနက္ခင္းတစ္ခုမွာ လမ္းေဘးမုန႔္ဆိုင္ေရွ႕ ဆိုင္ကယ္ကိုရပ္ အာလူးေၾကာ္ထုပ္တြဲ ေတြ ကိုင္ကာ ဆိုင္ထဲဝင္လာတဲ့ လူတစ္ဦး….
“ ကြၽန္ေတာ့္သမီးေလးေတြနာမည္နဲ႔ ထုတ္ထားတဲ့ အာလူးေၾကာ္ထုတ္ေလးေတြပါ။ ဆိုင္မွာ ေရာင္းေပးၾကည့္ပါလား” ဆိုၿပီး ေဖ်ာ့ေတာ့ေနတဲ့ အသံေလးနဲ႔ ေျပာလာတဲ့ ထိုလူရဲ႕ အသံေၾကာင့္ ဆိုင္ဖြင့္ခါနီးအလုပ္ေတြရႈပ္ေနတဲ့ ဆိုင္ရွင္က လွည့္ၾကည့္လိုက္တယ္။ ဆိုင္ရွင္က အာလူးေၾကာ္ထုတ္လာေရာင္းတဲ့သူကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရင္း အံ့ၾသမင္သက္သြားခဲ့ပါတယ္။
ဇာတ္ပို႔ေလာကမွာ ေနရာတစ္ေနရာ ရခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ အံ့မင္းညိဳက အႏုပညာေလာကထဲကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ဝင္ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ VCD ႐ိုက္ကူးမႈေတြကေန စတင္ကာ ဇာတ္ကားေတြမွာ မင္းသားနဲ႔အၿပိဳင္ဇာတ္႐ုပ္ေတြ ႐ိုက္ကူးခဲ့ရၿပီး က်ရာဇာတ္႐ုပ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာမွာ ပါဝင္ခဲ့ရတဲ့ အံ့မင္းညိဳကေတာ့ ဗီဒီယိုေခတ္ပ်က္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မွာ ဇာတ္ကား ႐ိုက္ကူးမႈေတြ ႀကဲသြားတဲ့အခါ ဝါသနာပါတဲ့ အႏုပညာအလုပ္နဲ႔ မိသားစုဝမ္းေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။
“ဇာတ္ပို႔တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ ျဖတ္သန္းရတာက သူရဲ႕ ဝင္ေငြနဲ႔ မိသားစုကို ထမင္းေကြၽးဖို႔ကေတာ့ လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္ဘူးေလ။မင္းသားေတြကပဲ ဇာတ္ပို႔ျပန္လုပ္ေတာ့ ဇာတ္ပို႔သမားေတြက ေနရာမရေတာ့ဘူး။ အစ္ကိုကို႔ပဲ ၾကည့္ အလုပ္မရွိတာ ၂ႏွစ္ ၃ႏွစ္လာက္ ရွိၿပီ။ ဇာတ္ကား႐ိုက္ရမွမိသားစုကို ထမင္းေကြၽးဖို႔ဆိုရင္ ကိုး႐ိုးကားရားေတြ အကုန္ျဖစ္ကုန္မွာေပ့ါ။ အစ္ကိုတို႔ ရတဲ့ပိုက္ဆံေလးနဲ႔ စားတယ္ ေသာက္တယ္ သြားတယ္ လာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္လိုက္ရရင္လည္း မင္းသားနဲ႔ အၿပိဳင္ ဝတ္ေပးပါ ေျပာတယ္။ သူတို႔က လြယ္လြယ္ေလး ဝတ္ေပးပါလို႔ ေျပာလိုက္တာ။ သူတို႔ဝတ္ခိုင္းတဲ့ အဝတ္အစားေဈးႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုယ္ရတာနဲ႔က ဘယ္လို မွမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ကိုယ္အလုပ္မရွိေပမယ့္လည္း တျခားသူေတြ အလုပ္ရွိတာ ဝမ္းသာပါတယ္။ ဇာတ္ပို႔အလုပ္ခ်ည္း လုပ္ၿပီး ထမင္းစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး” ဆိုၿပီး အံ့မင္းညိဳက သူႀကဳံေတြခဲ့ရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပပါတယ္။
ဇာတ္ကားမ႐ိုက္ရတာ (၂)ႏွစ္ေက်ာ္ (၃)ႏွစ္ထဲကို ေရာက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အံ့မင္းညိဳက လက္ရွိမွာ “ ႏိုႏို၊သုန္သုန္” ဆိုတဲ့ သမီးေလးႏွစ္ေယာက္နာမည္နဲ႔ အာလူးေၾကာ္ထုပ္ေတြ ေရာင္းေနပါတယ္။ ဒီစီးပြားေရးကိုေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ စုၿပီး လုပ္ကိုင္ေနတာ ျဖစ္ကာ သူကိုယ္တိုင္ အာလူးေၾကာ္ထုပ္ေတြ လိုက္ပို႔ေနတာပါ။
႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြသာ ႐ိုက္ကူးလာတဲ့ ဒီဘက္ေခတ္မွာ ဇာတ္ပို႔သမားေတြအတြက္ ေနရာရႏိုင္ဖို႔ အရမ္းကို ခဲယဥ္းလို႔ လာပါတယ္။ အဓိကက်တဲ့ ဇာတ္ပို႔ေနရာေတြဆိုရင္လည္း မင္းသားမင္းသမီးအငယ္ေတြကိုထည့္သြင္း ႐ိုက္ကူးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္လို ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြမွာ အႀကိတ္အနယ္၊အၿပိဳင္အဆိုင္ ေတြ႕ရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အခုခ်ိန္မွာ မေတြ႕ရေတာ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထုတ္လုပ္သူဘက္က ယခုလို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
“မျမင္ရေတာ့ဘူး။ မေတြ႕ရေတာ့ဘူးဆိုတာကလည္း သူတို႔ကို ျမင္ရတာ အရမ္းမ်ားေတာ့ အရင္ကာ႐ိုက္တာ အရ သူတို႔ကို ႐ိုက္မယ္ ဆိုရင္ဘယ္ေနရာမွာ ႐ိုက္ရမယ္ဆိုတာ မသိေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနတာလို႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္။ အမွန္ကေတာ့ ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံေတြေဖာင္းပြေနတာ။ အရင္ကေတာ့ ဗီဒီယိုေတြက လွိမ့္႐ိုက္ေတာ့ တကယ္တမ္းအခုက်ေတာ့မရွိေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္သမားေတြက ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႐ုပ္ရွင္ေလာကကို မ်က္စိက်လာၿပီေလ။ ဒီေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္မႈနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္မႈက အရမ္းကြာတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ေလာက အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လိုက္ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ သူကေတာ့ ပါလာမွာပဲ။ မလိုက္ႏိုင္တဲ့သူကေတာ့ ဒီလမ္းေၾကာင္းကေန ေပ်ာက္ထြက္သြားမွာပဲ” လို႔ Golden Hour ထုတ္လုပ္ေရး ကိုေကာင္းေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။
“ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ႏွာေခါင္းေပါက္မွာ အသက္ရႈေနသ၍ အႏုပညာအလုပ္ကို ဆက္လုပ္သြားမွာပါ” လို႔ သူက ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန႔္ က်င္လည္ခဲ့ရတဲ့ အႏုပညာအလုပ္အေပၚ သံေယာဇဥ္မျပတ္စြာနဲ႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ Duwun
ဇာတ်ပို့သမားတွေအနေနဲ့ လာမယ့် ရုပ်ရှင်ရေစီးကြောင်းမှာ နေရာရနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် modify လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုပြီး ထုတ်လုပ်သူတွေဘက်က အကြံပေးထားပါတယ်။ လတ်ရှိအခြေအနေအရတော့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ ဇာတ်ပို့၊ဇာတ်ရံတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပျောက်ဆုံးနေပြီး ဘဝရပ်တည်မှုအတွက် ကြုံရာကျပန်းအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေကြရပါတယ်။
မှုန်ရီဝါးနေတဲ့ နံနက်ခင်းတစ်ခုမှာ လမ်းဘေးမုန့်ဆိုင်ရှေ့ ဆိုင်ကယ်ကိုရပ် အာလူးကြော်ထုပ်တွဲ တွေ ကိုင်ကာ ဆိုင်ထဲဝင်လာတဲ့ လူတစ်ဦး….
“ ကျွန်တော့်သမီးလေးတွေနာမည်နဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ အာလူးကြော်ထုတ်လေးတွေပါ။ ဆိုင်မှာ ရောင်းပေးကြည့်ပါလား” ဆိုပြီး ဖျော့တော့နေတဲ့ အသံလေးနဲ့ ပြောလာတဲ့ ထိုလူရဲ့ အသံကြောင့် ဆိုင်ဖွင့်ခါနီးအလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့ ဆိုင်ရှင်က လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဆိုင်ရှင်က အာလူးကြော်ထုတ်လာရောင်းတဲ့သူကို စေ့စေ့ကြည့်ရင်း အံ့သြမင်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။
“ဟာ………….သရုပ်ဆောင် ကိုအံ့မင်းညိုပါလား ..လာလာအစ်ကိုပေးပေး ကျွန်တော့်ဆိုင်မှာ ရောင်းကြည့်ပေးမယ်လေ။ ဒါနဲ့အစ်ကို …သရုပ်ဆောင်မလုပ်တော့ဘူးလား” ဆိုတဲ့ ဆိုင်ရှင်ရဲ့ အမေးကို အံ့မင်းညိုက“ကျွန်တော်ဇာတ်ကားမရိုက်ရတာ ၂နှစ်ကျော်လောက်ရှိနေပြီဗျာ”ဆိုပြီး ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတော့ သရုပ်ဆောင် အံ့မင်းညိုတစ်ယောက် မန္တလေးတိုင်း၊ အမရပူရ မြို့နယ်၊ ရှမ်းကလေးကျွန်း စံပြကျေးရွာမှာ နေထိုင်ရင်း ဝမ်းရေးအတွက် အာလူးကြော်ရောင်းခါစမှာ သူ့ကို မှတ်မိနေကြတဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါ။
ဇာတ်ပို့လောကမှာ နေရာတစ်နေရာ ရခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် အံ့မင်းညိုက အနုပညာလောကထဲကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက ဝင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ VCD ရိုက်ကူးမှုတွေကနေ စတင်ကာ ဇာတ်ကားတွေမှာ မင်းသားနဲ့အပြိုင်ဇာတ်ရုပ်တွေ ရိုက်ကူးခဲ့ရပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာမှာ ပါဝင်ခဲ့ရတဲ့ အံ့မင်းညိုကတော့ ဗီဒီယိုခေတ်ပျက်ပြီးနောက်ပိုင်း မှာ ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးမှုတွေ ကြဲသွားတဲ့အခါ ဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာအလုပ်နဲ့ မိသားစုဝမ်းရေးပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
“ဇာတ်ပို့တစ်ယောက်ကတော့ ဒီအချိန်မှာ ဖြတ်သန်းရတာက သူရဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ မိသားစုကို ထမင်းကျွေးဖို့ကတော့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။မင်းသားတွေကပဲ ဇာတ်ပို့ပြန်လုပ်တော့ ဇာတ်ပို့သမားတွေက နေရာမရတော့ဘူး။ အစ်ကိုကို့ပဲ ကြည့် အလုပ်မရှိတာ ၂နှစ် ၃နှစ်လာက် ရှိပြီ။ ဇာတ်ကားရိုက်ရမှမိသားစုကို ထမင်းကျွေးဖို့ဆိုရင် ကိုးရိုးကားရားတွေ အကုန်ဖြစ်ကုန်မှာပေ့ါ။ အစ်ကိုတို့ ရတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့ စားတယ် သောက်တယ် သွားတယ် လာတယ်၊ ပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်လိုက်ရရင်လည်း မင်းသားနဲ့ အပြိုင် ဝတ်ပေးပါ ပြောတယ်။ သူတို့က လွယ်လွယ်လေး ဝတ်ပေးပါလို့ ပြောလိုက်တာ။ သူတို့ဝတ်ခိုင်းတဲ့ အဝတ်အစားဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ကိုယ်ရတာနဲ့က ဘယ်လို မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ်အလုပ်မရှိပေမယ့်လည်း တခြားသူတွေ အလုပ်ရှိတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ ဇာတ်ပို့အလုပ်ချည်း လုပ်ပြီး ထမင်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချိန်မှာ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး” ဆိုပြီး အံ့မင်းညိုက သူကြုံတွေခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပါတယ်။
ဇာတ်ကားမရိုက်ရတာ (၂)နှစ်ကျော် (၃)နှစ်ထဲကို ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ အံ့မင်းညိုက လက်ရှိမှာ “ နိုနို၊သုန်သုန်” ဆိုတဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်နာမည်နဲ့ အာလူးကြော်ထုပ်တွေ ရောင်းနေပါတယ်။ ဒီစီးပွားရေးကိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုပြီး လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ကာ သူကိုယ်တိုင် အာလူးကြော်ထုပ်တွေ လိုက်ပို့နေတာပါ။
ဗီဒီယိုခေတ်ပျက်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံသမား တော်တော်များများ ဇာတ်ကား မရိုက်ရတော့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ ကြုံတွေခဲ့ရပါတယ်။ တချို့ဆို အံ့မင်းညိုတို့လို ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး အလုပ်လေးတွေ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ရင်း မိသားစုရဲ့ ဝမ်းရေးကို ဖြေရှင်းနေကြရပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေ အကုန်လုံး အလုပ်မရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံ အနည်းစုသာ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုတွေ လုပ်နေရတာပါ။
ဇာတ်ပို့သမားတွေအတွက် အလုပ်ရရှိရေးကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဘက်က တက်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပေးနေတယ်လို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ အသစ် ဦးညီညီထွန်းလွင်က ပြောပါတယ်။
“ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေ အလုပ်အကိုင်မရှိဘူး။ ချယ်နယ်လိုင်းတွေမှာ ပြည်တွင်းကားပြသမှုက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြည်ပကားက၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေတာ။ ပြည်ပမှာတွေက အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ ချယ်နယ်လိုင်းကနေ ပြည်တွင်းကားပြသမှု ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်အောင် လုပ်လို့မရတာတောင်မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရနိုင်ရင် ကိုယ့်ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေ ကင်မရာမန်းတွေအကုန်အလုပ်ပြန်ရလာမယ်။ အဲဒါလေးလုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်”လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေသာ ရိုက်ကူးလာတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဇာတ်ပို့သမားတွေအတွက် နေရာရနိုင်ဖို့ အရမ်းကို ခဲယဉ်းလို့ လာပါတယ်။ အဓိကကျတဲ့ ဇာတ်ပို့နေရာတွေဆိုရင်လည်း မင်းသားမင်းသမီးအငယ်တွေကိုထည့်သွင်း ရိုက်ကူးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်လို ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာ အကြိတ်အနယ်၊အပြိုင်အဆိုင် တွေ့ရတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ တော်တော်များများကို အခုချိန်မှာ မတွေ့ရတော့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထုတ်လုပ်သူဘက်က ယခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“မမြင်ရတော့ဘူး။ မတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတာကလည်း သူတို့ကို မြင်ရတာ အရမ်းများတော့ အရင်ကာရိုက်တာ အရ သူတို့ကို ရိုက်မယ် ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာ ရိုက်ရမယ်ဆိုတာ မသိတော့ဘူး ဖြစ်နေတာလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ အမှန်ကတော့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေဖောင်းပွနေတာ။ အရင်ကတော့ ဗီဒီယိုတွေက လှိမ့်ရိုက်တော့ တကယ်တမ်းအခုကျတော့မရှိတော့ဘူး။ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်သမားတွေက ဒီနိုင်ငံရဲ့ ရုပ်ရှင်လောကကို မျက်စိကျလာပြီလေ။ ဒီတော့ သူတို့ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်မှုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်မှုက အရမ်းကွာတယ်။ ရုပ်ရှင်လောက အပြောင်းအလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ လိုက်ပြောင်းနိုင်တဲ့ သူကတော့ ပါလာမှာပဲ။ မလိုက်နိုင်တဲ့သူကတော့ ဒီလမ်းကြောင်းကနေ ပျောက်ထွက်သွားမှာပဲ” လို့ Golden Hour ထုတ်လုပ်ရေး ကိုကောင်းကျော်က ပြောပါတယ်။
ဇာတ်ပို့သမားတွေအနေနဲ့ လာမယ့် ရုပ်ရှင်ရေစီးကြောင်းမှာ နေရာရနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် modify လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုပြီး ထုတ်လုပ်သူတွေဘက်က အကြံပေးထားပါတယ်။ အရံလောကရဲ့ အဓိက အခက်အခဲတစ်ခုဟာ သရုပ်ဆောင်တွေ အရမ်းကို ဖောင်းပွနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကိုကောင်းကျော်က သုံးသပ်ထားပါသေးတယ်။
“ကိုယ်ကအကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားရင်တော့ ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာရော ငွေကြေးရော လိုက်လာမယ်လို့ ထင်တယ်။အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ အခုသူတို့ ဖြစ်နေတာတွေက သူတို့အရှေ့မှာ ရိုက်လာတာ အရမ်းများတော့ သူတို့ အရည်အသွေးကို မထိန်းသိမ်းခဲ့ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ အရံတွေကပျောက်သွားလိမ့်မယ် ။ မင်းသားမင်းသမီးတွေထဲမှာမှ second roll တွေ third rollတွေက အရံတွေ ဖြစ်လာမယ်။ ဖြစ်လည်း ဖြစ်နေပြီ။ တခြားသူတွေကတော့ တခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ပြောင်းမှ ဖြစ်တော့မှာ”” လို့ သူက ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ ဗီဒီယိုတွေ ခေတ်ပျက်ခဲ့ပေမယ့်လည်းနောက်ပိုင်းမှာ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေ များစွာ ရိုက်ကူးလာရပါတယ်။ ဒီလိုရိုက်ကူးခဲ့ရပေမယ့် ယင်းဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ မင်းသားမင်းသမီးကြီးတွေက ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံအနေနဲ့ ပါဝင်လာနေခဲ့တာဟာလည်း ဇာတ်ပို့သမားတွေအတွက် နေရာပျောက်နေသလို ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
လူငယ်ဒါရိုက်တာတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်သူအသစ်တွေ အနုပညာလောကထဲ ဝင်ရောက်လာချိန်မှာ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံ သမားတွေအတွက် အနုပညာကြေးနှုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရမ်းစကားမပြောရတော့ဘူးလို့ တချို့သော ဇာတ်ပို့သမားတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အခြေအနေကြီးတစ်ခုက ရှိနေတဲ့အတွက် ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံသမားတွေအတွက် အနုပညာကြေး ရရှိမှုကတော့ နည်းပါးမြဲ နည်းပါးဆဲပါပဲ။
“တချို့တွေကျတော့လည်း သိပ်ဈေးမဆစ်တာတွေရှိတယ်ဆိုပေမယ့် တချို့အသစ်တွေလည်း ဈေးစစ်တာပဲ။ အတူတူပါပဲ။ ဇာတ်ပို့သမားတွေကို ပေးတဲ့ ဈေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခေါက်ရိုးကျိုးသွားတာတာလားတော့မသိတော့ပါဘူး။ အဓိကက ချိတ်ပေးထားတဲ့ မန်နေဂျာတွေက လူဟောင်းလူသစ်ရောနေတဲ့ မထူးပါဘူး။စစ်နေတာပါပဲ”လို့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ဘိုဘိုက ပြောပါတယ်။
ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံသမားတွေအတွက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ နေရာရမှု နည်းနေပေမယ့်လည်း လက်ရှိမှာ အာလူးကြော်ရောင်းနေရတဲ့ အံ့မင်းညိုကတော့ အခွင့်သာတာနဲ့ အနုပညာအလုပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေဆဲပါ။
“ကျွန်တော်ကတော့ နှာခေါင်းပေါက်မှာ အသက်ရှုနေသ၍ အနုပညာအလုပ်ကို ဆက်လုပ်သွားမှာပါ” လို့ သူက နှစ်ပေါင်း ၂၀ ခန့် ကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ အနုပညာအလုပ်အပေါ် သံယောဇဉ်မပြတ်စွာနဲ့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Duwun